China Kraft Paper Stand Up Pouch orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Hong Bang
Kraft taratasy mitsangana paosy
ny paosy mitsangana paosy dia fomba famonosana malaza indrindra amin'ny tsena satria ity karazana fonosana ity dia mahomby sy azo ampiharina ary manintona. Araka ny tondroin'ny anarana azy manokana, ireo kitapo ireo dia afaka mijoro amin'ny faritra sarotra rehetra. Izy io dia manana fahaiza-manao fampisehoana talantalana lehibe ary azon'izy ireo atao ny mampihena ny filan'ny fitehirizana ary mampitombo ny haben'ny talantalana. Matetika, ny paosy mitsangana dia ampiasaina amin'ny sakafom-bary, fanosotra, firavaka, dite na kafe. Fananana ilay paosy mitsangana
ny paosy mitsangana dia vokarina avy amina sosona maromaro amin'ny sakana izay azo sokajiana ho vondrona lehibe 3, izay miaraka manome ny paosin'ireo toetra mateza sy maharitra tsy mahatohitra. Ireto vondrona 3 ireto dia:
sosona ivelany: mamela ny fanaovana pirinty sary, mitondra dokam-barotra izay mampita hafatra marika ary miantso ny mpanjifa.
sosona afovoany: miasa ho toy ny sakana fiarovana mba hiantohana ny fihazonana ny atin'ny kitapo ho azo antoka sy vaovao.
sosona anatiny: ny sosona lehibe indrindra amin'ireo telo. Ity sosona ity dia ekena fda matetika mba hahazoana antoka fa azo antoka ny sakafo rehefa mifandray amin'ny fonosana. Azo fehezina ihany koa izy io hanomezana toky ny mpanjifa fa tsy nisy nanodinkodina ilay paosy.
ny paosy mitsangana dia mamela ihany koa ireo fiasa azo namboarina toy ny zipera, lavaka ambony, takelaka mandatsa-dranomaso ary spout hanatsara ny fiarovana azy amin'ny asany sy ny kalitaony avo lenta no ho fototray voalohany. Ny vokatray rehetra dia vita amin'ny akora ara-tsakafo izay midika fa ny sarimihetsika ampiasainay, ny ranomainty ary ny tsipika famokarana dia fiarovana 100% ho an'ny ankizy lehibe na kely aza. Ankoatr'izay, henjana izahay amin'ny kalitao izay midika fandeferana aotra amin'ny endrika marimaritra iraisana izay mampiseho amin'ny fananganana matanjaka, ny fahateren'ny rivotra ary ny fanontana mazava. Ny fametahana lalao marefo sy lavorary miaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa dia ho tanjontsika hatrany.
endri-javatra ny paosy mitsangana
porofo maivana porofon'ny fofona
varavarankely manamarina azo zahana endrika ivelany mora vivi endrika azo ampiasaina azo ampiasaina
lanja maivana sy azo zahana tsy misy mampifandanja lalao mora mijoro
bpa, lead, pvc, endrika tsy misy phthalate ary namboarina
ity misy fonosana hongbang. Manome vahaolana fonosana sakafo isan-karazany ho an'ny filàna sy fampiharana samihafa izahay. Ny fanamboaranay dia manaiky ny karazana vokatra namboarina. Azontsika atao ny manao ny vokatrao hiseho endrika hafa toy ny matte ambonin'ny, gloss ambonin'ny na mampiseho azy ireo miaraka amin'ny fonosana. Lazao anay ny zavatra takianay fa ho hitanay ny karazana filanareo rehetra. Tsy mamokatra vokatra izahay ary manandrana mitarika anao hanaraka azy ireo; mihaino ny filanao sy ny fanavaozana injeniera izahay izay hamaha ny olanao amin'ny fonosana.
serivisy sy fiantohana dia manana ekipa serivisy ho an'ny mpanjifa matihanina izahay hamaly sy hamaha ny fanontaniana ao anatin'ny 24 ora. Ny tranga tsirairay dia hanana olona manokana hiantohana ny famolavolana, ny habetsany, ny kalitao ary ny datin'ny fandefasana azy dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana. Tianay ny manome serivisy tsara indrindra ary manome ny mpanohana anay indrindra.
Teo aloha: Fandefasana haingana ho an'ny fonosana sakafo mahazatra - Kitapo taratasy fotsy misy paosy ambany - Hong Bang
Manaraka: Kitapo sakafo ho an'ny biby fiompy